Shil gaadhi oo ka dhacay Gabiley - BBC Somali
Shil gaadhi oo ka dhacay Gabiley
26 Febraayo 2016
Duleedka galbeed ee maagalada gabilay ee somaliland waxaa ku dhintay afar iyo toban qof , waxaana ku dhaawacmay sagaal qof oo kale , kadib markii maanta duhurkii ay isku dhaceen laba baabuur oo rakaab siday .
shilkan waxaa BBC u xaqiijiyay masuuliyiin u gurmaday goobtaasi iyo taliyaha guud ee ciidanka boliiska somaliland general Cabdillaahi Fadal . Xoghayaha dowlada hoose ee degmada gabilay Cabdiraxmaan Nuur ayaa BBC u sheegay galabta isagoo ku sugan goobtu shilku ka dhacay in dadka dhaawaca ah loo soo qaaday cisbitaallada gabiley iyo Hargeysa . wuxuu sheegay in dadka dhintay kow iyo toban yihiin rag , saddexna dumar,
iyadoo afar qof oo dhintay isku qoys ahaayeen . labadii darewel ee labada baabuur ayaa uu sheegay xoghayuhu inay ku jiraan dadka dhintay ee rakaabka ahaa .
Labada baabuur ee isku dhacay midkood wuxuu ahaa Mini Bus Noha halka kan kalena ahaa Toyota landcruser .
Taliyaha guud ee ciidanka Boliiska somaliland General Fadal wuxuu sheegay in haatan boliiska taraafikadu bilaabeen baadhitaan ku saabsan shilkan naxdinta leh .
Waa shilkii ugu dhimashada badanaa ee ka dhaca somaliland labaatankii sano ee ugu danbeeyay .sanadkii 1996
ayaa shil laba baabuur isku dhaceen duleedka magaalada Sheekh waxaa ku dhintay 24 qof sida taliyaha boliisku cadeeyay maanta . Madaxweyne Axed Siilaanyo aya dhanbaal tacsiya u diray dadkii shilkaasi ku waxyeeloobay .